လိင်ဂိမ်းအရွယ်ရောက်ပြီးသူဂိမ်းတစ်ခုအကြီးအကျယ်စုဆောင်းခြင်းနှင့်အတူလာမယ့်သည်နှင့်သူတို့အားလုံးအိုင်ကွန်များ၏ကြောက်မက်ဘွယ်ဆုံးဖြတ်ချက်၌သင်တို့ထံသို့လာကြ၏။ သင်ကစားချင်သည့်အခါတိုင်း,ရုံကဒီမှာလာငါတို့သည်သင်တို့အဘို့စတိုးဆိုင်ရှိသမျှ၏အမျိုးအနွယ်ရှိသည်။ ဒီဆိုက်ပေါ်မှာအရာအားလုံးကိုသင်ဖြစ်နိုင်သမျှထင်ဘယ်တော့မှကြောင်းနည်းလမ်းတွေနဲ့သင်သွားနေပါတယ်။ ဂိမ်းကစားခြင်းသည်သင်၏စိတ်ကူးယဉ်မှုကိုအသနားခံသည့်နည်းလမ်းသည်သင်အွန်လိုင်းမတိုင်မီကြုံတွေ့ရမည့်အခြားအရာများနှင့်မတူပါ။ ဤဂိမ်းအချို့သည်ထိန်းချုပ်မှု၏ကိစ္စတွင်လိင်ဆက်ဆံခြင်းထက်ပင်ပိုကောင်းပြီးအခြားသူများကပင်ညစ်ညမ်းရုပ်ရှင်များထက်ရှုပ်ထွေးမှုပိုကောင်းသည်။, ကြှနျုပျတို့သညျဤဆိုဒ်တွင်ရှိသည်အရာအားလုံးအံ့သြဖွယ်ဂရပ်ဖစ်နှင့်အချို့သောကြောက်မက်ဘွယ်ဂိမ်းနှင့်အတူလာမယ့်ဖြစ်ပါတယ်။ အရာအားလုံးကိုညစ်ညမ်းပြွန်မှနှုတ်ဆက်ပြောနှင့်ငါတို့ကဲ့သို့ဆိုဒ်များမှအားလုံးသင့်ရဲ့ယုတ်အကြောင်းအရာရတဲ့စတင်ရန်ဤမျှလောက်များစွာသောအကြောင်းပြချက်ပေးတော်မူမည်သောညစ်ညမ်းဂိမ်း၏မျိုးဆက်သစ်ကနေကြောင့်ပါပဲ။
သင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကောင်းမွန်စွာဖွဲ့စည်းထားသောဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်သူတို့အားလုံးကိုလွယ်ကူစွာရှာဖွေနိုင်သည်။ ကျနော်တို့စနစ်တကျကျနော်တို့ကဒီမှာရှိသည်သမျှသောဂိမ်းများကိုဆက်ကပ်ကျနော်တို့ဖော်ပြချက်များနှင့်အကြံပြုချက်များနှင့်အတူထိုသူအပေါင်းတို့ကိုဆက်ကပ်။ သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောဂိမ်းတစ်ခုကိုတွေ့ပြီသည်နှင့်တပြိုင်နက်သင်လုပ်ရန်လိုအပ်သမျှသည်ကစားခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။ အရာအားလုံးဘရောက်ဇာကိုအခြေခံပြီးကတည်းကဒေါင်းလုပ်မရှိပါ၊သင်၏ဘရောက်ဇာတွင်လိုအပ်သည့်တိုးချဲ့မှုမရှိပါ။ သင်တစ်ဦးလိင်ပြွန်အပေါ်တစ်ဦးညစ်ညမ်းဗီဒီယိုကိုကြည့်နေကြသည်လျှင်အဖြစ်ဂိမ်းကစားရ။ သို့သော်သင်မှတဆင့်ထိုင်ရန်ရှိသည်သောသူအပေါင်းတို့သည်နှောင့်အယှက်ဗီဒီယိုကြော်ငြာတွေရလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။, ကျွန်ုပ်တို့၏ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်အလံကြော်ငြာများကိုသာတပ်ဆင်ပါ၊အခြား ၀ က်ဘ်ဆိုက်များသည်သင်၏လည်ချောင်းကိုတွန်းအားပေးသည့်အရာနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ဘာမျှမရှိပါ။ ဤသူအပေါင်းတို့သည်ဂိမ်းအကြောင်းကိုနောက်ထပ်ကြောက်မက်ဘွယ်အရာသူတို့မဆိုဘရောက်ဇာအတွက်နှင့်မည်သည့်ကိရိယာပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျကန့်သတ်ကျော်သင်နှစ်သက်လိမ့်မည်ဟုစစ်မှန်သောလက်ဝါးကပ်တိုင်ပလက်ဖောင်းအတွေ့အကြုံကိုပျော်မွေ့ပါလိမ့်မယ်။
လိင်ဂိမ်းများကဲ့သို့ဆိုဒ်များညစ်ညမ်းလောကီသားတို့သည်အထဲမှာအရာအားလုံးပြောင်းလဲသွားတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ ကျနော်တို့သင်ညစ်ညမ်းဗီဒီယိုများကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ရုံယခုမှဂိမ်းများကစားတက်ပေးခြင်းဖွင့်ပေးခြင်းကိုစဉ်းစားစတင်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်တော်လှန်ရေးသမားနေသောအရွယ်ရောက်ပြီးသူဂိမ်းများ၏နောက်မျိုးဆက်ဆောင်ခဲ့ရမည်။ သင်ဤစုဆောင်းမှုထဲတွင်ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်သမျှသောဂိမ်းကိုသင်ယခုအချိန်အထိအရွယ်ရောက်ပြီးသူဂိမ်းကစားခြင်း၌သင်တို့အစဉ်အဆက်ရှိခဲ့ပါတယ်သောအကောင်းဆုံးအတွေ့အကြုံအချို့ကိုပေးသွားမှာပါ။ ကျနော်တို့ယခုအချိန်တွင်၏နောက်ဆုံးပေါ်ဂိမ်းနှင့်အတူလာကျနော်တို့အတော်လေးအချို့ခဏအဘို့ဤစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်တက်ကြွစွာခဲ့ကြသော်လည်း,ပင်ကျနော်တို့အသစ်ဖြန့်ချိမှုအချို့ဘယ်လောက်အံ့သြဖွယ်အားဖြင့်အံ့အားသင့်ခဲ့ကြသည်။, အဆိုပါဂရပ်ဖစ်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ဖြစ်ကြသည်။ ဒါကြောင့်,တစ်ခါတစ်ရံလက်ဖွဲ့လိင်ဂိမ်းထဲမှာသင်အပြစ်ပေးနေသောသူငယ်၏ဝမ်းနည်းခံစားစတင်ပါလိမ့်မည်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်. သင်တို့သည်လည်းအားလုံးသင့်ရဲ့စိတ်ကူးယဉ်များအတွက်ပိုပြီးစွဲငြိဖွယ်ရာအတွေ့အကြုံကိုခံစားရ,သင်သည်သင်၏ကြင်နာတွေ့ကြုံခံစားဘယ်လိုကျော်ထိန်းချုပ်မှုတွေအများကြီးပေးခြင်းကြောင်းဂိမ်းနှင့်အတူ.
ငါတို့ရှိသမျှသည်ဂိမ်းများကိုပူဇော်သောပေါ်ပင်ပလက်ဖောင်းနေ့စွဲအထိနှင့်သင့်လိုအပ်ချက်များကိုနှစ်သက်ဖို့ရည်ရွယ်သည်။ ကျနော်တို့သင်စနစ်တကျကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်၏အကြောင်းအရာခံစားရန်လိုအပ်ပါတယ်အားလုံးကြည့်ရှုကိရိယာများရှိသည်။ စမတ်ဖုန်းနှင့်တက်ဘလက်များတွင်ပါ ၀ င်သည့်မည်သည့်ကိရိယာတွင်မဆိုအလုပ်လုပ်မည့်ဂိမ်းများလည်းရှိသည်၊ထို့ကြောင့်သင်စိတ်ပျက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ကျနော်တို့ရှိသည်အရာအားလုံးအခမဲ့အဘို့သင်တို့ထံသို့လာသည်နှင့်သင်ကစားရမတိုင်မီဘာမှလုပ်ဖို့မလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့ညစ်ညမ်းလောကီသားတို့သည်အံ့သြဖွယ်အတွေ့အကြုံကိုပေးမည်လိင်ဂိမ်းရှိသည်နှင့်သင်မှတ်ပုံတင်သို့မဟုတ်အစဉ်အဆက်အသက်အရွယ်မှတပါးကိုယ့်ကိုကိုယ်အကြောင်းကိုမဆိုအချက်အလက်တက်ပေးခြင်းမပါဘဲသူတို့ကိုပျော်မွေ့နိုင်ပါ။, သငျသညျ 18 သို့မဟုတ်ဤသူအပေါင်းတို့သည်ဂိမ်းကျော်မှန်လျှင်ညာဘက်ကနေစတင်ရင်းသင့်ဖြစ်လိမ့်မည်။ စတင်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ထိုသူအပေါင်းတို့ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိ။ သူတို့ကိုသင်နှစ်သက်ပါစေနှင့်သင်အွန်လိုင်းအားလုံးသင့်ရဲ့စိတ်ကူးယဉ်ပျော်မွေ့သောလမ်းကိုပြောင်းလဲပစ်ပါ။
ကျနော်တို့အင်တာနက်ပေါ်ရှိလိင်ဂိမ်းရဲ့အကောင်းဆုံးစုဆောင်းမှုတစ်ခုရှိသည်နှင့်ငါတို့သည်သင်တို့အစဉ်အဆက်အွန်လိုင်းရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်အကောင်းဆုံးညစ်ညမ်းဂိမ်းကစားဆိုဒ်များတဦးအပေါ်အခမဲ့အဘို့အကအားလုံးကိုဆက်ကပ်။ သင်စုစုပေါင်းအမည်မဖော်အတွက်ညစ်ညမ်းခံစားနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပလက်ဖောင်း၏အင်္ဂါရပ်အားလုံးကိုဧည့်သည်များအားဖြင့်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ သင်ပင်အဘယ်သူမျှမအစဉ်အဆက်သင်၏ဝိသေသလက္ခဏာထွက်ရှာတွေ့လိမ့်မည်ဟုသိမှတ်ဤဆိုက်ပေါ်တွင်မှတ်ချက်များနှင့်ဖိုရမ်ပို့စ်များကိုရေးသားနိုင်ပါတယ်။ နေသမျှကာလပတ်လုံးသင်ကိုယ်တိုင်တဦးတည်းလက်၌သင်တို့၏ဒစ်နှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်အပေါ်ဖမ်းမိမရကြဘူးအဖြစ်,အဘယ်သူမျှမအစဉ်အဆက်သင်ဒီမှာခဲ့ကွောငျးကိုသိနိုငျသညျ။